पख्नुहोस् !! कस्तो औषधि प्रयोग गर्नुहुदैछ ? प्रयोग गर्नु भन्दा पहिले यी कुराहरुमा ध्यान पुर्याउनुहोस् - ज्ञानविज्ञान
‘अस्पष्ट प्रेस्क्रिप्सनका कारण बिरामीको स्वास्थ्यमा समस्या पर्यो भने कारवाहीको लागि काउन्सिलमा निवेदन दिन सकिने तर अहिले सम्म त्यस्तो निवेदन काउन्सिलमा नआएको’ रजिस्ट्रार डा. शर्माले बताए । यो एक वर्षको अवधिमा कति डाक्टरमा प्रेस्क्रिप्सनमा सुधार आयो भन्ने कुनै पनि अनुसन्धान नगरिए पनि केही मात्रामा सुधार आएको काउन्सिलको अनुमान छ ।
Up Next एकछिन् !! के पत्रिकामा चटपटे खानुहुदैछ ? स्वास्थ्य बिगार्न चाहनुहुन्न भने सुरुमा यो पढ्नुहोस्